China Ideski lokufundwa lokubhala lesimanje lanamhlanje elinerelu lamabhuku lezingane Umkhiqizi Nomhlinzeki | Yifan
Ideski lokufunda lokubhala lesimanje lanamuhla elinerelu yezincwadi yezingane
Leli deski lokuklama elilula elinendawo yokugcina eningi, ikhabethe elilodwa, ikhabethe eli-1, ishelufu lamabhuku eliwu-1 elivulekile.
Min.Order Ubuningi: 30Izingcezu
Inkokhelo Imigomo: I-T / T.
EZIPHUMA Ishalofu eli-1, isifuba esingu-1 esinomnyango
IZINTO melamine ibhodi
ITHEBULA DIMENSION 120/140 / 160x60x75cm
Eyakhelwe ukugcina engqondweni, ikuvumela ukuthi ugcine ukuhleleka nokuhleleka ehhovisi lakho lasekhaya. Ifaka ideskithophu ejulile, i-50 / 60cm, ikhabethe elijulile lenza ikhaya elifanele lale mibhalo yangasese. futhi uvule ishelufu lamabhuku e-cube, elikunika indawo ekahle yokwehla ukutadisha, ukubhala, noma umsebenzi webhizinisi.
Okokusebenza yi-MDF nebhodi lezinhlayiya, i-E1 ejwayelekile, ihambisana nezinga lokuphepha lokuvikelwa kwemvelo. Ngobuso be-melamine laminated, obunokumelana nomlilo kanye ne-anti-scratch, kuyabonakala kakhulu.
Kukhona osayizi aba-3 abatholakalayo, obuncane obungu-100x50x75cm, ishelufu lamabhuku lingu-80x24x60cm, ophakathi nendawo u-120x60x75cm, ngosayizi weshelufu lamabhuku u-100x24x60cm, okukhudlwana kukhulu ngu-120x60x75cm, ishelufu lamabhuku lingu-120x24x60cm, ukuphakama kukonke kungu-135cm nekhabethe lekhabethe.
Kukhona osayizi ababili bekhabethe le-cube, elilodwa linama-cubes ama-5, elinye lingama-cubes ayi-7, lapho ungabeka khona amafayela, imisebenzi yamaphepha, yemibhalo yangasese, kukhona ikhabethe elijulile lokuwagcina. Okunye futhi, ukuthi ishalofu liyashintsheka, liqonde mpo, noma liwe phansi, ukuze ulisethe lihambisane nezidingo zakho.
Imibala ejwayelekile i-oki ne-walnut, enedilowa elilodwa nomnyango ongu-1 ngombala omhlophe.
sisebenzisa i-hardware esezingeni eliphakeme, abagijimi bensimbi ababushelelezi, ihinji eliseduze.
Imikhiqizo yethu yenzelwe izingane, ukugcinwa, nokugqokwa engqondweni futhi yakhelwe ukubhekana nokusetshenziswa kwansuku zonke.
Kuyisengezo esihle impela ekamelweni lakho lokulala noma ehhovisi lasekhaya.
Izinkuni impahla: izinhlayiya ibhodi
1drawer, 1 umnyango, 1 ishelufu lamabhuku
eshalofini adjustable. Ngamacube ayi-5/7
Ukuzenzela umhlangano - 2 abantu abanconyiwe
Isiqinisekiso seminyaka emithathu sakwaMaunfacturer
Usayizi H135, W100 / 120, D50 / 60cm
Umthamo womthwalo omkhulu wedeski 15kg
Langaphambilini Ideski lamakhompiyutha lanamuhla lehhovisi lasekhaya
Olandelayo: Ideski lekhompyutha lokubhala elilula nelicwebezelayo lehhovisi lasekhaya
Ithebula Le-Computer Desk
I-Silver Computer Desk
Ideski Lekhompyutha Elimhlophe Neligolide
Ideski Elimhlophe Lekhompyutha
Ithebula Elimhlophe Lekhompyutha
Esobala isitayela ekhaya ehhovisi computer etafuleni ...
7 okudonsa ababhala ideski lekhompyutha lehhovisi lasekhaya ...
Modern compact computer edeskini ehhovisi ekhaya WI ...
Ideski lekhompyutha lokubhala elilula futhi elihlangene ...
Ideskithophu Yekhompyutha YF-GD-001